Mustaqbalkii Aubameyang Oo Dhinac U dhacay, Xaalada Thiago Alcântara Ee Liverpool Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Ay Caawa Qoreen Wargaysyada Yurub. - Gool24.Net
Mustaqbalkii Aubameyang Oo Dhinac U dhacay, Xaalada Thiago Alcântara Ee Liverpool Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Ay Caawa Qoreen Wargaysyada Yurub.
August 6, 2020 Mahamoud Batalaale
Fiid wanaagsan ama waqti kasta oo aad joogtaan oo wanaagsan. Ku soo dhawaaday wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo waxyaabihii ugu danbeeyay ee ay wargaysyada Yurub caawa ka qoreen.
Wararka suuqa kala iibsiga waxaa xaqiiqonimadooda masuul ah ah il wareedyada aanu idiin soo raacino iyada oo sidii aad nooga barateen aanu war kastaba idiin sheegno halka uu tixraaciisu yahay ee il wareedka xogtaasi ka soo baxday.
Aan ku bilawnee, kooxda Arsenal ayaa heshay warkii ugu fiicnaa kadib markii ay Pierre-Emerick Aubameyang ay ku qanciyeen in uu saxiixo heshiis cusub oo uu kooxda ku sii joogi doono waxaana xogta warkan hadda si buuxda u xaqiijiyay Sky Sports News.
Dhinaca kale Daily Telegraph ayaa si rasmi ah u shaacisay in Aubameyang uu qarka u saaran yahay in uu soo gaba gabeeyo wararkii xanta suuqa ee mustaqbalkiisa wuxuuna saxiixayaa heshiis cusub si uu meesha uga saaro shakigii mustaqbalkiisa maadaama oo heshiiskiisa haddu uu dhacayo xili ciyaareedka soo socda.
Aubameyang oo 22 gool oo PRemier league ah xili ciyaareedkan u soo dhaliyay Arsenal waxa uu ahaa xidigii ka caawiyay koobka FA Cupka kadib markii uu laba gool ka dhaliyay Chelsea wuxuuna hadda qalinka ku duugayaa heshiis cusub oo uu Emirates Stadium ku sii joogayo.
Auba waxa uu saxiixayaa heshiis saddex sanadood ah wuxuuna todobaadkii mushaar ahaan u qaadan doonaa £250,000 kun oo gini iyada oo la filayo in heshiiskiisa cusub ay Arsenal ku dhawaaqi doonto.
Liverpool ayaa dalab rasmi ah ka gudbisay difaaca kooxda Norwich City ee Jamal Lewis waxayna Reds doonaysa in ay markale raacdo dariiqii ay xili ciyaareedyadii la soo dhaafay ku soo faa’iiday ee ay kooxaha heerka labaad u dhaca ay ciyaartoyda ugala soo wareegayeen.
Liverpool ayaa doonaysa in difaaca bidix ee Jamal Lewis uu noqdo mid si toos ah tartan ula gala Andy Robertson kaas oo aanu Jurgen Klopp booskiisa ciyaartoy kale oo muhiim ah u haysan.
Sida uu hadda shaaciyay wariyaha The Athletic ee James Pearce, waxay Liverpool dalab rasmi ah oo 10 milyan gini ku qiimaysan ay u dirtay kooxda Norwich City si ay u helaan saxiixa Jamal Lewis.
Liverpool ayaa sidoo kale kooxda Norwich City waxay u balan qaaday in ay heshiiska Jamal Lewis ugu dari doonto in ay lacago dheeraad ah ku heli karaan haddii ay Reds mustaqbalka difaacan iibiso.
Barcelona ayaa warkii ugu fiicnaa ka heshay tababarihii hore ee kooxdeeda ee Pep Guardiola kaas oo si rasmi ah ugu dhawaaqay in difaac aadka loo qiimeeyo ee Eric García oo kooxda kowaad ee City ka tirsani uu iska diiday in uu heshiis cusub saxiixo wuxuuna Guardiola cadeeyay in Eric García uu doonayo in uu Barcelona ku biiro.
Kooxda Premier League u soo dalacday ee Leeds United ayaa kooxda Jose Mourinho ee Tottenham ka doonaysa 22 sano jirka difaac ka ciyaara ee Juan Foyth waxayna ku heli kartaa 15 miyan gini sida lagu shaaciyay Daily Star.
RASMI: Jose Mourinho ayaa shaqaalaha tababarka kooxdiisa Tottenham ku soo darsaday halyaygii hore ee kooxda Spurs ee Ledley King kaas oo qayb ka soo noqday shaqaalaha uu Mourinho doonayo in uu xili ciyaareedka cusub caawin ka helo waxaana warkan si rasmi ah ugu dhawaaqday Tottenham.
Thiago Alcântara ayaa wali xiisaynaya in uu Jurgen Klopp kula biiro kooxda Liverpool inkasta oo uu xiiso ka helayo kooxda PSG. Liverpool ayaa ka walwalsan rekoodhka dhaawacyada Thiago laakiin wali waxa uu xidiga reer Spain doonayaa in uu Reds ku soo biiro sida uu qoray wargayska Kicker.
Tottenham ayaa dalab rasmi ah oo 25 milyan gini ku qiimaysan ka gudbisay xidiga kooxda Southampton ee Pierre-Emile Højbjerg waxaynaSaints si buuxda u aqbashay dalabka Spurs sida lagu shaaciyay talkSPORT iyada oo Mourinho uu dib u habayn ku samaynayo Tottenham.
Tababaraha kooxda PSG ee Thomas Tuchel ayaa doonaya in uu ka faa’iidaysto khilaafka kooxda Bayern Munich iyo difaaca kooxdeeda ee David Alaba waxayna PSG xidigan u arkaan badalka saxda ah ee Thiago Silva oo si xor ah ku baxaya waxaana warkan lagu daabacay wargayska France ka soo baxa ee Le10 Sport.
Man United ayaa lacag u dhexaysa 5 ilaa 10 milyan gini waxay siisay Alexis Sánchez ka hor intii aanu ku biirin kooxda uu amaahda ku joogay ee Inter Miilan waxayna lacagtani sii kordhinaysaa khasaaraha wayn ee United ka soo gaadhay Sanchez sida lagu shaaciyay Telegraph.
Juventus ayaa si dhaw ula socota xidiga ay kooxo badan ee Yurub ahi doonayeen ee Houssem Aouar oo ka tirsan kooxda Lyon laakiin Juve waxay u baahan tahay in ay bixiso 70 milyan gini haddii ay doonayso in ay dhamaystirto heshiiska 22 sano jirkan sida uu sheegay Calcio Mercato.
Xidiga ay Man United doonayso ee Jadon Sancho ayaa dib ugu soo laabtay xarunta tababarka kooxdiisa Borusia Dortmund isaga oo bilaabay in uu isku diyaariyo xili ciyaareedka cusub kadib markii uu maamulka kooxdiisu si rasmi ah u beeniyay in ay wax heshiis ah la gaadheen Man United.
Kadib markii ay Man City intii lagu jiray 48 kii saacadood ee ugu danbeeyay ay dhamaystirtay heshiisyada Ferran Torres iyo Nathan Aké waxa uu hadda Guardiola doonayaa difaac Napoli ee Kalidou Koulibaly sida lagu qoray Sky Sports.